Gbasara anyị - Foshan City Nanhai Yingjiwei Aluminium Building Materials Co., Ltd.
Foshan City Nanhai Yingjiwei Aluminium Building Materials Co., Ltd e hiwere na 2009, emi odude ke Lishui Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, banyere 20KM si Guangzhou Baiyun International Airport. Anyị factory ekpuchi ebe ndị karịrị 80,000 square mita, nke na-e nwere ihe na-erughị 200 ndị ọrụ na 30 ahụmahụ na-emepụta. Anyị ọkachamara na ịmịpụta ihe mkpuchi aluminom, ogwe ụgbụ ụrọ nke aluminom na uko ụlọ alumini nwere ụdị ọgwụgwọ dị iche iche dịka: PVDF / Fluorocarbon mkpuchi, mkpuchi ntụ ntụ, marble na ọka ọka osisi, anodized na UV sere na na. A na-enye anyị ntụ ntụ site n'aka ụlọ ọrụ Akzo Nobel a ma ama n'ụwa, nke ga-eme ka mkpuchi mkpuchi nke ngwaahịa anyị dị elu ma sie ike.
Enwere igwe 3 nke igwe eji egwu egwu, uzo iri na abuo nke igwe ntaneti, uzo ato nke igwe ntanaka, uzo iri na abuo nke igwe ocha, uzo ato nke igwe obibi akwụkwọ nke UV na uzo abuo nke igwe ejiji laser na ogbako a na ewebata uzo anyi. si Japan. Ihe a na-emepụta kwa afọ nke ihe mkpuchi aluminom bụ ihe dị ka nde mita 2.3.
Ngwaahịa anyị na-enwe ezigbo nkwupụta ma jiri ya na ụlọ na nke mba ọzọ, ha kwesịrị ekwesị maka ụlọ nkwari akụ, ụlọ ọgwụ, ụlọ obibi, ụlọ obibi, ọdụ ụgbọ oloko, ọdụ ụgbọ oloko, nnukwu ụlọ ahịa, ụlọ ọrụ na skyscraper wdg. Ọrụ ndị anyị nyere gụnyere Guangzhou Baiyun Ọdụ ụgbọ elu; Zhengzhou Olympic mgbatị; Canton Fair Exhibition Hall, Commercial Bank of Ethiopia na National Court nke Singapore ...
Obi ji obi ụtọ na-anabata ndị enyi anyị na ndị ahịa si n'akụkụ ụwa nile ileta anyị factory. Anyị ga-eme ike anyị niile iji nye gị ọrụ kacha mma maka mkpuchi aluminom. Ebe Yingjiwei dị, enwere ụzọ.